Alaabta guriga leh
Nolosha casriga ahi waxay ka dhigeysaa dalabyo gaar ah oo ku saabsan qofka, laakiin sidoo kale ku saabsan sida gurigiisa loo qorsheeyey. Habka ugu caansan ee guriga loo dhiso sannadihii la soo dhaafay waxay noqdeen qalab alaab ah. Waxay ka caawisaa qof kasta in uu dareemo sida naqshadeeye iyo ogaado riyooyinkooda.
Waa maxay alaabta guriga leh?
Tani waa xirmooyin kala duwan oo qiyaasta caadiga ah. Waxaad iibsan kartaa tiro kasta oo ka mid ah waxyaallaha oo aad u diyaargaroobi karto. Waxay u egtahay naqshadeeye, kaas oo aad ka dhigi kartid wax kasta. Inta u dhaxaysa qaanuunada waxaa suurtagal ah in la geliyo boorashka, lafdhabariyo. Dhammaan arrimahan waxaa lagu sameeyaa qaab isku mid ah oo ka dhigaya gudaha gudaha dhismaha oo dhamaystiran oo isku dhafan.
Faa'iidooyinka alaabta guriga leh
iyada oo gargaarkeeda waxaad ka soo qaadan kartaa qol kasta. Iyadoo loo eegayo xajmiga alaabta gudaha iyo ujeedada, waxaad si madax-bannaan u dooran kartaa lambarka iyo nooca modules. Waxaa jira siyaabo badan oo loo qaban karo, iyo waqti ka dib, qaybaha si sahlan loo beddeli karo oo gudaha dib loo cusbooneysiiyo;
waxaad qurxin kartaa qolka qaabka aad ku riyootay, oo waxay noqon doontaa mid gaar ah oo gaar ah;
Alaabtaas oo kale way fududahay in la doorto, la keeno, loona soo qaato xittaa keligiis. Waxaad iibsan kartaa tiro kasta oo ka mid ah modules, ugu dambeyntii iibsashada dadka kale haddii ay dhacdo inay guurto ama dayactirto;
waayo wax soo saarka qalabka tayada sare leh ayaa loo isticmaalaa - iftiin iyo cimri dheer. Teknoolojiyadda casriga ahi waxay u oggolaanaysaa inay abuuraan qaybo leh xariijimo siman ama meelo wareegsan;
qalabka wax lagu karsado waxaa ka mid ah alaabooyin farabadan: armaajooyinka, roogagga, qalabka, roogagga, roogagga, silsiladaha sawirada iyo xitaa fadhiya;
Tani waa doorka ugu wanaagsan ee guryaha yar yar, maaddaama ayan ku xirnayn nidaamyo badan;
Alaabtaas oo kale waa ka raqiisan tahay midka dalbashada.
Maxay yihiin maadooyinka jaban?
Inta badan waxaa lagu sameeyaa warshadaha waaweyn ee alaabta guriga, halkaas oo wax soo saarku ku xiran yahay biyaha;
sameeyaan iyaga oo aan tixgelineynin sifooyinka shaqsiyadeed ee qolalka sida waafaqsan heerarka caadiga ah;
qalabka lagu sameeyo alaabtaas oo kale maaha mid qaali ah, inta badan waxay yihiin jiir ama MDF;
badiyaa qaybaha ayaa lagu soo gudbiyaa foomka laysku daray. Adigu waad soo ururin kartaa adiguna tani waa kharash yar.
Waa noocee qalabka dhismaha leh?
Noocyo kala duwan ayaa loo qoondeeyey iyada oo ku xiran ujeedka ujeeddooyinka ama waxyaabaha ay ka kooban tahay:
alaab- kabka sheyga ee alwaaxa waa mid aad u caan ah. Waxay u saamaxdaa qof inuu dareemo sida naqshadeeye. Wuxuu go'aamin karaa sida dharka uu noqon doono, illaa iyo intee derbigu yahay, imisa qaybood ayaa istaagi doona iyo waxa rahyadu u dhaxeyso iyaga;
qalabka jilicsan ee jilicsan ayaa ah mid aan caadi ahayn, inkastoo ay sidoo kale aad u habboon tahay. Waxaad awoodi kartaa, markaad ka fekereyso, qaybo kala duwan oo jilicsan ama kursiyada kuraasta dhererka kala duwan. Waxay noqon karaan qayb ahaan, horay u taagay wax soo saarka iyo mobile, kuwaas oo la guuri karo, cusbooneysiinaya gudaha gudaha si waafaqsan niyadda iyo deegaanka;
Maqaayadda iyo musqusha waxaa lagu sameeyaa qoto dheer oo qoto dheer oo laga helo - laga bilaabo 20 sentimitir. Qolalka aadka u fiican ee qolalkaan waxay u egyihiin alaabta guriga leh. Maaddooyinka qoyaan la'aanta ee casriga ahi waxay nadiifin karaan;
si gaar ah ayey suurtogal u tahay in lagu qoondeeyo qalabka alaabta guriga loogu talagalay carruurta . Xannaanadu waxay aad muhiim u tahay in si habboon loo abaabulo booska. Qeybaha gacanta ayaa kuu oggolaanaya in aad sameysid gudaha dhismo gaar ah xitaa aag yar. Maxay muhiim u tahay - marka ilmuhu koro, waxaad ka iibsan kartaa qaybaha muhiimka ah iyo xaaladdu waxay u dhigantaa baahidiisa. Alaab guri oo loogu talagalay dhallinyarada ayaa sidoo kale ku habboon. Waxay jecel yihiin fududeyntooda dhaqdhaqaaqa iyo naqshad casri ah. Halka qolka loogu talagalay gogosha gabdhaha ah ee gabdhuhu waxay abuuri doontaa raaxo iyagoo haysta sawirro yaryar, armaajo iyo baakado.
Alaabtaas fudud ee fudud ayaa si fiican loogu talagalay dadka aan jeclayn qalabka guryaha adag iyo naqshadeynta naqshadeynta sawirrada iyo qaababka. Si fudud, dhaqdhaqaaqa iyo sahlanaanta dayactirka ayaa ah sifooyinka ugu muhiimsan ee naqshadeynta gudaha ee gudaha.
Sida loo doorto laminate tayo leh?
Sawirro loogu talagalay jikada gacmo gaar ah
Gogolka midabka ee gudaha
Qoryaha derbiga alwaax
Gawaarida xayndaabka xagaaga ee barbecue
Magaalooyinka derbiga ee gudaha
Qoryo qoryo leh
Nidaamka loo yaqaan 'mezzanine'
Xirmooyinka qoryaha leh gacmahooda
Qolka ku yaal jikada
Rikoodhada madadaalada 2014
Maxaa dhab ahaan la siiyaa carruurta ku jirta kantiinada dugsiyada?
Maxaa la xirxiraya maro jilicsan?
Daryeelka Victoria ee dayrta
Bella Hadid waxay ka jawaabtay eedeymo ah "qof aan caadi ahayn": "Hareeradu waa wax aan ahayn qaylo gargaar"
32 toddobaad oo uur ah - tani waa sidee bilood?
Nadiifinta shaaha si aad u lumiso guriga
Sidee loo noqon karaa, haddii aad tahay qof doonaya?
Xidhiidhka lala yeesho nin is qaba - talo ku saabsan dhakhtar nafsiga ah
Miscanthus - degitaanka iyo daryeelka ee dhulka furan
Farshaxanada kirismaska ​​carruurta
Mashiinka dhaqidda - shirkada ay dooranayso?
Dariishadaha daaqadaha daaqadaha
Ku sawiridda derbiga gudaha gudaha
Sandals on wedge 2014
Sidee loo kariyaa pike foornada?
Kabaha Louis Viton
Saladh oo leh beerka - cuntada sida caadiga ah